> Resource> iTunes> Olee otú iji tọghata Napster ka iTunes
Napster bụ a n'oge gara aga free omume, ma ugbu a a na-ewu ewu online music echere ịzụta songs na ọdịyo faịlụ. I nwere ike iche nke na-adọkpụpụta ha ka ha iTunes maka nchebe ruo mgbe ebighị ebi, ma ọ bụ tọghata ha ka ha iPod, iPhone maka playback n'oge ọ bụla, n'ebe ọ bụla. Na isiokwu a ga-egosi gị otú nyefee Napster ka iTunes na abụọ n'akụkụ.
Nkebi nke 1: Olee otú iji tọghata Napster ka iTunes
Nke na-egbu ngwá ọrụ na-eji iji tọghata Napster ka iTunes bụ ike audio edekọ - Streaming Audio Recorder. Nke a Napster ka iTunes Ntụgharị e mere ka ịdekọ ọdịyo na N'ikpeazụ n'ịwa a MP3 faịlụ dị ka Napster song arụ site na kọmputa gị si ụda kaadị. Mgbe ahụ ị pụrụ nyefee MP3 faịlụ ka iTunes ozugbo na ngwa a.
Nzọụkwụ 1: Download na wụnye a smart ngwa. Ọ bụrụ na ị na-adịghị, ọ ma, ị nwere ike nweta ya site na n'okpuru njikọ.
Nzọụkwụ 2: ẹkedori ya na see "Record" bọtịnụ na n'elu-akaekpe. Mgbe ahụ na-egwu otu Napster song ị chọrọ nyefee. Lee, nke a smart ngwa Ndekọ song. Mgbe song dị n'elu, na ndekọ ga-akwụsị n'otu ntabi, na-azọpụta faịlụ na MP3 format enweghị ihe ọ bụla audio ọnwụ.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ ndị MP3 faịlụ, dị nnọọ nri-pịa ya na Ọbá akwụkwọ na họrọ "Open na nchekwa."
Nzọụkwụ 3: Chetara dere track na a na ngwa si ​​n'ọbá akwụkwọ, wee pịa "Tinye ka iTunes" button na ala nke isi interface.
Ọ na-mere! Gị Napster music bụ na iTunes playlist aha ya bụ "SAR". Ọ bụ ihe ịtụnanya, ọ bụghị ya? Ọ bụ ruru ego. Ị maara, ị nwere ike ghara ịnọgide na-ụfọdụ music ma ọ bụrụ na ị na-adịghị anọgide na-akwụ ụgwọ mgbe na ndenye aha expires. Ya mere, ọ pụrụ ikwu nke a ngwa nwere ike ịzọpụta a otutu ego maka gị.
Part 2: Olee nyefee Napster ka iTunes ozugbo
Na akụkụ a, ị ga-amụta otú kpọmkwem nyefee usoro egwu n'etiti Napster na iTunes ngwa ngwa.
1. agba ọsọ gị Napster omume na iTunes na gị na desktọọpụ.
2. Right-pịa song ị chọrọ nyefee na Napster omume na pịa "Chọpụta" na-emeghe nchekwa ebe song na-echekwara.
3. See "Music" mgbata na-ekpe na-n'akụkụ menu nke gị iTunes.
4. Kpọmkwem ịdọrọ & dobe song si ya nchekwa na iTunes "Music" Library.